Garoonka Diyaaradaha ee Berbera Yaa lagu wareejiyay?:Heshiisyadda Ceshiimadda (Concessions) iyo Gaar yeelidda hantidda dawladda (Privatision) – WARSOOR
Shirkadda lagu wareejinayo maamulka/lahaanshaha ta ay tahay, cidda leh, khibradda iyo waayo aragnimadda ay u leedahay hawlaha maamulka garoonadda diyaaradaha.
Maalgelinta ay shirkadda lagu wareejinayaa samaynayso iyo xaddigeeda. Sidoo kale muddada heshiiska iyo khidmada maamulka ee qaranku siinayo shirkaddaas iyadda.
Nooca heshiiska lala galaya iyadana waa inuu cad yahay. Lahaansha garoonka miyaa la wareejinayaa? Ma maamulka ayuun baa la wareejinayaa ee dawladda ayaa lahaanaysa? Ma qaar ka mid ah adeegyadda garoonka ayuun baa la wareejinaya sida rarka iyo dejinta (handling), amaanka (secuirity) iyo barxadda gaadidka (parking)? Ma iskaashi dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay baa( PPP)?